Agromart | Agricultural Marketplace Nepal स्क्वास खेती गर्ने तरिका – Agromart
स्क्वास खेती गर्ने तरिका
Q 1. स्क्वास कुन तरकारी बाली समूह अन्तर्गत पर्ने तरकारी वाली हो?
स्क्वास फर्सी बाली वा लहरे बाली समूह अन्तर्गत पर्ने एक अगौटे तरकारी बालीहो। नेपालमा जुकिनी समूहका जातहरुको खेती गरिने भएकोले यसलाई जुकिनी स्क्वास वा जुकिनी फर्सी पनि भन्ने चलन छ।
Q 2. स्क्वास फर्सीको विशेषता के हो ?
Q 3. यो बाली कस्तो किसिमको हावापानीमा राम्ररी फस्टाउँछ ?
Q 5. नेपालमा पाइने स्थानिय जातहरुमा कुन जात सबैभन्दा प्रचलित छ र किन ?
Q 6. स्क्वासका अन्य जातहरु कुन–कुन हुन्?
Q 7. स्क्वास रोप्ने जमीन कसरी तयार गरिन्छ ?
Q 8. स्क्वासको बीउ सोझै खेतमा रोप्न सकिन्छ तर आजकल किन प्लाष्टिक थैलामा पनि उमारिन्छ ?
Q 9. स्क्वास खेती गर्दा मलखादको ब्यवस्थापन कसरी गरिन्छ ?
Q 10. स्क्वासको बेर्ना कसरी रोपिन्छ?
Q 11. मौसम अनुसार सिंचाई तथा निकासको व्यवस्था कस्तो हुनु जरुरी छ ?
Q 12. स्क्वासमा सुक्ष्म तत्वको प्रयोग कसरी गरिन्छ?
Q 13. स्क्वास बालीमा रोपाई पछिको हेरचाह कसरी गरिन्छ?
Q 14. स्क्वास बालीमा लाग्ने मुख्य कीराहरु कुन कुन हुन्?
Q 15. स्क्वास बालीमा लाग्ने फलको औंसाको नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ ?
Q 16. स्क्वास बालीमा लाग्ने रातो खपटे कीराको नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ ?
रातो खपटे कीराले कलिला पातको तल्लो सतहको हरियो भाग कोत्रेर खान्छन् र पातका नसाहरु देखिन्छन्। यस कीरालाई नियन्त्रण गर्न बेर्ना सार्ने वेलामा मालाथियन ५ प्रतिशतको धुलो १ किलोग्राम प्रतिरोपनीका दरले माटोमा छर्नुका साथै बिरुवामा प्रकोप देखिएको अवस्थामाउक्त विषादि २ मि.लि. प्रति लिटर पानीमा मिसाई बिरुवामा छर्नु पर्दछ।
Q 17. स्क्वास बालीका मुख्य रोगहरु कुन कुन हुन् ?
Q 18. स्क्वास बालीमा लाग्ने पाउडरी मिल्ड्यू रोगका लक्षण र रोकथामका उपाय बताई दिनुहुन्छ कि ?
Q 19. स्क्वास बालीमा लाग्ने डाउनी मिल्ड्यू रोगकालक्षण र रोकथामका उपायबारे बताई दिनुस्?
डाउनी मिल्ड्यू रोगको कारणले शुरुको अबस्थामा पातको माथिल्लो सतहमा चहकिलो पहेंलारखैरा थोप्लाहरु देखिन्छन् भने तल्लो सतहमा काला रंगका ढुसीदेखा परेर अन्ततः पातहरु सुक्न थाल्दछन्। यस रोगको रोकथामका लागि बेभिष्टिन २ ग्राम प्रति के.जी. बीउका दरले उपचार गरेको बीउमात्र प्रयोग गर्ने तथा रोगको प्रकोप बढि भएमा तामायुक्त (कपर अक्सिक्लोराइड) बिषादी २-३ ग्राम प्रति लिटर पानीमा मिसाएर छर्कने।
Q 20. स्क्वासको उत्पादन प्रति रोपनी कतिसम्म हुन्छ?
Q 21. स्क्वास फर्सी बालीको टिपाई कसरी गर्नु पर्दछ ?
Q 22. छनौट/ग्रेडिङ्ग गर्दा कुन कुन कुराहरुमा ध्यान पुर्यातउनु पर्दछ ?
Q 23. स्क्वास फर्सीलाई प्याकिङ्ग कसरी र कुन सामग्री प्रयोग गरी गर्नु पर्दछ ?
प्याकिङ्गको लागि प्लाष्टिक क्रेट, काठको बाकस, टोकरी, खर्पन वा कागजको कार्टुन प्रयोग गर्नु पर्दछ।डोका तथा टोकरीहरू प्रयोग गर्दा सोली आकारको भन्दा लगभग तलमाथि बरावर व्यास भएकोमा प्याकिङ्ग गर्नु राम्रो हुन्छ।कागजको कार्टुन बाहेक अन्य प्याकिङ्ग सामग्रीहरूमा प्याकिङ्ग गर्दा कुसनको काम गर्ने गरी पिंध र वरिपरि कागज, पराल, जङ्गली अथवा तरकारीका पातहरू राखी प्याकिङ्ग गर्नु पर्दछ।
Q 24. फल ढुवानी गर्दा कसरी फललाई बचाउन सकिन्छ ?
ग्रेडिङ्ग/छनौट गरिएका फलहरुलाई प्लाष्टिक क्रेट, टोकरी, डोको वोरामा टम्म मिलाएर ढुवानी गर्नु पर्दछ। यसरी टाढा ढुवानी गर्दा प्लाष्टिक क्रेटमा राख्दा बढी सुरक्षित हुन्छ। क्रेटमा प्याकिङ्ग गर्दा माथिल्लो भागमा केही ठाउँ खाली राख्नु पर्दछ जसले गर्दा अर्को क्रेटको भारले फल थिच्चिने डर हुँदैन।